Fikirka Qaldan Ee Galmada Ee Dumarku Ku Fikiraan, Gabaryahay Iskal Ilaali - iftineducation.com
aadan21 / April 7, 2017
iftineducation.com – Inkastoo dumarku ka duwan yihiin raga sida ay u fikirayaan marka ay tahay fikirka ku saabsan galmada ayaa ayaguna ka yaraysan raga.
Marka ay tahay dhinaca fikirka galmada ayaa waxa jira cadaadis ka saaran hablaha meel kasta oo ay caalamka ka joogaan. Laakiin in uu qofku ku fikiro waxa uu rabo waa mid aan la is hortaagi karin. Maxaa yeelay lama arko waxa ku jira qalbiga ama madaxa qofka oo uu ku fikirayo.
Laakiin waxa dhibku dhacayaa marka uu qofku ku kaco waxa uu ku fikirayo.
Halkan hoose iftineducation.com waxa uu kuugu gudbinayaa dhowr ka mid ah fikirka qaldan ee dumarka firkirkooda galmada:
Nin ka ka da’a yar: Waxa ay labaduba rag iyo dumar ka siman yihiin fikirka qaldan ee ah in ay la kulmaan oo ay la raaxaystaan da’a ka yar ta ay ku jiraan.
Galmo nin ayna kasayn: Waxa ay ku fikiraan in ay la kulmaan nin ayna aqoon oo ay si buuxda ula raaxaysataan.
Nin u ah adoonka raaxada: Rag iyo dumar ayaa waxa ay labaduba ka siman yihiin in ay ku dhalato fikir ah in ay noqdaan adeege iyo loo adeege. Adeege oo ah ka noqonaya adoonka iyo loo adeege oo nogonaya ka adoonsanaya. Hadaba hablaha ayaa waxa ay k u fikiraan in ay lahaan lahaayeen adoonka raaxada, walibana u adeega.
Sii xoog ah: Waxaa jira dumar ku fikira in xoog ah loogu raaxeeyo lakiin waa mid ah aad u qaab daran